ओली फर्किएपछिको पहिलो बैठक अध्यक्षता कसले गर्ला ?::देश र जनताप्रति समर्पित
ओली फर्किएपछिको पहिलो बैठक अध्यक्षता कसले गर्ला ?
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज बस्ने भएको छ।
नेकपा कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न ४ बजे बैठक बस्ने जानकारी गराए।
दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीसहितको बैठकले गरेका जनवर्गीय सङ्गठन र विभागको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जमा केही हेरफेर गरेको थियो। यसैगरी सोही बैठकले पार्टीभित्र अनुशासन खस्कँदै गएको भन्दै कुनै पनि विषय पार्टीभित्र नराखी सार्वजनिक रुपमा प्रचारबाजी गर्नेमाथि कारवाही गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री उपचार गरेर फर्केपछि पहिलोपटक आज सचिवालयको बैठक बस्न लागेको हो। उनी उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका दिन गत भदौ ५ गते पनि सचिवालय बैठक बसेको थियो। यस अगाडिको बैठकमा प्रचण्डले अध्यक्षता गरेका थिए तर ओली फर्किसकेको अवस्थामा प्रचण्डले अध्यक्षता गर्ने पाउने छैनन् ।
यि हुन नेकपाका २२ संगठनका ४४ नेताहरु कसको भागमा को ?
पोलिटब्युरो छान्‍न प्रचण्डलाई सकस, नाम काट्दै थप्दै
बिद्यार्थी र युवामा ओली प्रचण्डका अडान, रस्मी र रन्जित हेराहेर